Umenzi weFavicon: Uyenza njani iFavicon
NgoMgqibelo, Oktobha 11, 2008 NgoLwesine, uJuni 25, 2015 Douglas Karr
Oku kunokubonakala kuyinto engenamsebenzi, kodwa ngalo lonke ixesha ndifumana indawo entle kwaye kungekho icon iyintandokazi iboniswayo kwisikhangeli, ndiyazibuza ukuba kutheni umsebenzi ungagqitywanga. Kuyavunywa, ifavicon yam ayisiyonto ibabazekayo… bendifuna ukufumana into eyahlula indawo yam kwabanye:
Ukuseta okusisiseko kweFavicon
Ukuba awusetanga i-favicon kwiwebhusayithi yakho, ilula ngendlela emangalisayo. Eyona ndlela ilula kukushiya ifayile ye icon ebizwa ngokuba ifavicon.ico kwingcambu yolawulo lwewebhusayithi yakho. Ihlala ithatha iinkqubo ze icon njenge Microangelo (isicelo esikhulu sophuhliso lwe icon) kodwa zintle kakhulu ezinye izixhobo zokwenza i-icon kwi-intanethi!
Mane ulayishe nayiphi na ifayile yemifanekiso kwiDynamic Drive, ukhuphe ifayile, kwaye uyilahle kulawulo lweengcambu. Zonke izikhangeli zangoku ziya kujonga kwaye zibonise le icon kwibar yedilesi.
Ukuseta okuPhezulu kweFavicon
Ukuba ungathanda ukuqinisa indawo yakho kwaye uphuhlise ngokufanelekileyo i icon oyithandayo, kukho i-header HTML ongayifaka.
Ukuba usebenzisa i-WordPress, ungongeza le khowudi kwi-header.php yetemplate yakho kwi icandelo.
tags: ifavicon yoopopayifaviconUmvelisi wefavicon
Okt 12, 2008 ngexesha 8:46 AM
Ingcebiso entle, uDoug. Kwafuneka ukongeze kwangoko umlingo kwiwebhusayithi yethu 😉
http://abitofmagic.no/english -Ngoku ngefavicon yoopopayi.
Okt 12, 2008 ngexesha 11:22 AM
I-gif epholileyo kakhulu! Intle!
Okt 12, 2008 ngexesha 9:35 AM
Ukwenza ifavicon ngenene yenye yeemfuno zokuyilwa kwakhona kwewebhusayithi yam. Ndayinyanzelisa.
Okt 12, 2008 ngexesha 11:23 AM
Ndicinga ukuba kufanele ukuba ibe kwindawo yomntu wonke, uPatric. Ndisebenze nomzobi obonisa ngokukodwa ukudalwa kwe icon kwaye bubugcisa ngokwenene, nabo!
Oktobha 2, 2012 ngo-7: 46 PM
Ndisasebenzisa iMichelangelo. Kwimeko apho ubungazi, ungafaka ubungakanani obuninzi kwifavicon ke ukuba umntu uyirhuqa kwidesktop (okanye efanayo) awubambeki kuhlobo lwe-16 × 16.
Oktobha 2, 2012 ngo-8: 20 PM
Kuya kufuneka nditsho, ngenkcazo ifayile ye-icon yingqokelela yemifanekiso eyahlukeneyo. Umvelisi weFavicon uya kwenza uluhlu oluninzi!